श्रीमानलाई नराम्रो शब्द बोल्ने, हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्यै श्रीमानलाई प्रगती गर्न दिदैनन ! – Sandesh Press
July 23, 2021 164
श्रीमान्लाई नराम्रो शब्द बोल्ने, हेपेर बोल्ने महिलाले कहिल्लै श्रीमानलाइ प्रगती गर्न दिदैनन ! चाहे जसले जे भनोस श्रीमान भनेका देवता हुन् । श्रीमानहरु परिवारको लागि म’र्न तयार हुन्छन । आफ्नो श्रीमान लाइ जतिबेला पनि नराम्रो सब्द बोल्ने हेपेर बोल्ने चिच्याएर बोल्ने महिलाले कहिल्लै पनि आफ्नो पुरुषको भलो हुन दिदैनन ! उक्तकुरा अध्ययन बाट प्रमाणित भएको छ।
Nextहप्ताको यो दिन महिला पुरुषहरुसँग हुन्छन् निकै आकर्षित
युएईमा आजबाट Part-Time Jobs गर्न पाइने, घण्टाको कति पाइन्छ ?